Fanadihadiana ny scanner BQ Ciclop 3D 2 taona taorian'ny nanombohany | Fitaovana maimaim-poana
Mandinika ny scanner an'ny BQ CICLOP 3D izahay
Ao amin'ny CES ny taona 2015 natolotra eo amin'ny fiaraha-monina ny bq scanner CICLOP 3D. Tetikasa loharanom-baovao misokatra izay nizara ilay orinasa tamin'ny vondrom-piarahamonina mpamorona iray manontolo ny asa ilaina amin'ny fampandrosoana ny scanner. Tamin'izany no nahafahan'ireo mpampiasa niara-niasa tamin'ny heviny sy ny fanatsarany manokana.
Ao amin'ity lahatsoratra ity izahay dia handinika ny fahanteran'ny vokatra ary raha mbola ilaina ny mahazo maodelin'ireto toetra ireto.
1 Teknolojia ampiasaina amin'ny scanning 3D
2 Endri-javatra amin'ny scanner BQ Ciclop 3D
3 Manala, mamory ary mametraka ny scanner BQ Ciclop 3D
5 Scans voalohany
Teknolojia ampiasaina amin'ny scanning 3D
Ciclop dia scanner mifototra amin'ny triangulation 3D izay mampiditra a mpivady laser manamboatra tsipika roa amin'ny zavatra mihodina eo amin'ny lampihazo. Ny fakantsary dia samy maka ny firakofana sy ny endrik'ilay zavatra nohamarinina.
Mahazo ilay zavatra mainty ny tara-pahazavana laser linear izay nivily lalana tamin'ny fisaintsainana ary azon'ny sensor izay mampita ny toeran'ny teboka tsirairay amin'ny tsanganana hita amin'ny rindrambaiko fanarenana ary noraketiny ao anaty tahiry miaraka amin'ny ambiny hahafahany mamorona sary 3D feno. Raha vantany vao miova ny endriny na ny toerany ilay zavatra, dia tsy hita taratra amin'ny fomba mitovy intsony ny hazavan'ny zava-nitranga, noho izany dia tsy natokana ho an'ny faritra fakantsary iray izy io ary noho izany dia teboka hafa no voasoratra ao amin'ilay maodely hojerena. ...
Mba ahafahana manodina ny fampahalalana rehetra azo amin'ny alàlan'ny fakantsary ary tantano ny safidy sy masontsivana an'ny scanner, bq dia namolavola an'i Horus, fampiharana multiplatform sy maimaim-poana.
Ny scanner BQ Ciclop 3D dia mamela scan zavatra hatramin'ny diameter 205mm amin'ny 205mm ny sakany ho an'ny famahana hatramin'ny 500 microns ao anatin'ny 5 minitra eo ho eo.
La elektronika ny scanner dia misy a Birao miorina Arduino, fakan-tsary Logitech, laser 2 linear ary motera stepper.
Endri-javatra amin'ny scanner BQ Ciclop 3D
Haben'ny scanna farany ambany: 205mm (savaivony) x 205mm (hahavony).
Optika / Sensor: Fakan-tsarimihetsika Logitech C270 HD 1280 x 960
vahaolana: 500 microns
Famaritana scanner: (x) 450 x (y) 330 x (z) 230 mm
Maizina ny faritra scan: (r) 205 x (h) 205 mm
Ny lanjan'ny scanner: 2 kg eo ho eo
Fahamarinana scan: 500 microns
Hafainganam-pandeha: 3-4 min eo ho eo.
Dingana isaky ny fihodinana: Teo anelanelan'ny 1600 sy 160
Toa na dia efa roa taona lasa izay taorian'ny nanombohan'ity vokatra ity dia tsy nitombo ny safidy hahazoana fitaovana amin'ny vidiny mirary ary ny Ireo scanner ao an-trano amin'izao fotoana izao dia manana ny endriny mitovy amin'ilay maodelin'ny bq.
Manala, mamory ary mametraka ny scanner BQ Ciclop 3D
El fitomboan'ny dia tena mora ary ny mpanamboatra dia nandrakitra an-tsoratra azy tsara. Miankina amin'ny fahaizanao manaraka ny boky torolalana afaka eo anelanelan'ny 30 minitra sy adiny iray izany hivory tanteraka ny fitaovana. Vita haingana be dia haingana isika, tsy miahanahana amin'ny dingana rehetra na manafoana ny ampahany noho ny fandikana diso ilay boky torolàlana.
Ny mpanamboatra aza dia nandefa horonantsary tamina youtube izay 3 minitra monja dia mampiseho amin'ny antsipiriany ny fomba tokony hametrahantsika ireo sanganasa rehetra.
Na eo aza ny zava-misy fa misy boky fampianarana amin'ny fiteny samihafa miaraka amin'ny vokatra, dia mamporisika anao izahay hamaky ny vavahadin-tranonkala Inona no anananao amin'ny vokatrao?. Ao amin'ny namoaka izay rehetra ilainao izy ireo hampiasa ny scanner-nao. Manomboka amin'ny boky torolàlana ka hatramin'ny farany ny rindrambaiko Horus.
Hitanay foana fa mampihomehy isika rehefa mividy vokatra izay misy ampahany navoakan'ny fanontana FDM. Raha ny scanner, ny singa plastika rehetra dia natao pirinty tamin'ny PLA. Sarotra ny orinasa kely iray manoloana ity fanao ity saingy sarotra ho antsika ny mieritreritra fa ity fomba ity dia mety hahasoa kokoa ny orinasa toy ny bq noho ny fanaovana lasitra fanindronana. Na izany aza dia afaka manamarina izany izahay ny kalitaon'ny fanontana an'ireo singa ireo dia tena tsara.
Ho an'ny fandidiana marina ny scanner Ny rindrambaiko Horus sy ny mpamily webcam Logitech dia mila apetraka izay mampiditra ny rafitra, izany rehetra izany dia hita ao amin'ny vavahadin-tranonkala mpanamboatra
Vantany vao vita ny boot voalohany, dia zahao fa ny ny rindrambaiko dia tompon'andraikitra amin'ny fanavaozana ny firmware an'ny arduino board Izay mampiditra. Raha nanao scanner manokana izahay afaka mampiasa arduino board rehetra izahay mahafeno ny fepetra voalaza amin'ny antsipirian'ny mpanamboatra. Antsipiriany tena lehibe momba ny asa tsara ataon'ny bq.
Manana ny zava-drehetra tafangona sy mifandray amin'ny PC isika, tonga ny fotoana fametrahana ny rindrambaiko ary manao ny scann voalohany.
Ny olana voalohany sendra anay dia ny fananana webcam hafa mifandray amin'ny horus PC dia tsy afaka namantatra ho azy hoe iza no tokony hampiasaina ary tsy afaka mampiseho mazava ny webcam hitan'izy ireo ilay rindrambaiko. Tao anatin'ny fanandramana roa hitantsika ny webcam marina, tsy misy zava-dehibe.
Ny etikety ihany no azontsika jerena na ny fakana loko ihany koa, amin'ny fampiasana laser roa na iray monja. Ary misy a safidy tsy misy farany azontsika ahitsy hanatsarana ny scan amin'ny toetran'ny tontolo iainana izay anaovantsika ny scan.
Lozam-pifamoivoizana ny scannner anay voalohany, izay etsy andaniny kosa lojika tanteraka, nandefa scan izahay nefa tsy nandinika akory. Ny fitsidihana ireo forum an'ny mpanamboatra dia mampianatra antsika izany ny rafitra triangulation laser dia tena mora tohina fa ny toerana misy ny laser 2 mifanelanelana dia mifanaraka tsara eo afovoan'ny fihodinana. Na izany aza, BQ dia nanadino zavatra tsotra toy ny fanamarihana ny afovoan'ny sehatra voalaza. Voavaha ny kianja, kompà, taratasy, penina ary olana. Raha vantany vao nohamafisina ny laser, dia nihatsara be ny kalitaon'ireo zavatra nojerena.
Rehefa mizaha zavatra iray dia mahazo teboka marobe azontsika itahirizana amin'ny endrika .ply fa ity rakitra ity dia tsy azo ampiasaina amin'ny mpanonta satria ny endrika mahazatra dia .stl. Fitsidihana iray hafa an'ny tranokalan'ny mpanamboatra no manazava fa ny rindrambaiko horus dia tsy mamorona rakitra .stl hahatrarana ity endrika ity dia tsy maintsy mampiasa programa open source hafa isika.
Ny fampiasana rindrambaiko faharoa hahatratrarana ny vokatra tadiavina dia mahatonga ny traikefa amin'ny fampiasana ilay scanner ho kely kokoa. na izany aza bq dia nandrakitra ireo dingana rehetra takiana mba hamita ilay asa.
Amin'ny sary dia hitantsika ny maodely notarafina sy ny sary 3D azo
Raha jerena ireo fitsapana natao dia azontsika hamafisina izany ny valiny dia ho samy hafa be arakaraka ny maro an'isa. Avy amin'ny jiro amin'ny faritra izay ananantsika ny scanner, ny maha-marina ny calibration izay efa notanterahintsika na koa ny loko izay anisany ilay zavatra nohamarinina.
Ny iray amin'ireo fanatsarana atolotry ny mpanamboatra azy dia sakano imbetsaka amin'ny zavatra samihafa ny zavatra ka ny mason'ny teboka dia manana faritra kely indrindra izay tsy azon'ny hazavan'ny taratra laser.
Na dia efa an-tsena nandritra ny 2 taona aza ity fitaovana ity ary Tsy misy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy io, mbola azontsika jerena any amin'ny orinasa hafa izany a eo amin'ny vidin'ny 250 €.
Ny fizahana endrika endrika 3D dia dingana sarotra iray izay novolavolaina teknika sy fitaovana tsy tambo isaina an'arivony euro. Tokony horaisintsika ny fetra inona no hananantsika miaraka amin'ny fitaovana ao an-trano.
Ity ekipa ity dia manana kalitao tsara / tahan'ny vidiny ary 2 taona taorian'ny fampisehoana azy teny an-tsena tsy lany andro io. Ny fomba nomen'ny mpanamboatra dia manamora ny traikefan'ny mpampiasa araka izay tratra.
Nahazo valiny tena hafa tokoa izahay teo amin'ireo zavatra samihafa nodiovinay, saingy amin'ny faharetana dia afaka mahazo endrika izay mahatoky amin'ny tena izy isika.
Vokatra mety izy io ho an'ireo mpanamboatra izay tia fanontana 3D izay mankafy ny fizotran'ny famoronana manontolo ary tsy manantena valiny tonga lafatra hatramin'ny fotoana voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Mandinika ny scanner an'ny BQ CICLOP 3D izahay
Joel Ontuna dia hoy izy:
Namana lahatsoratra mahaliana, mandinika ireo scanner 3D misy eny an-tsena aho, azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny fampahalalana vitsivitsy momba ny orinasa BQ
Valiny tamin'i Joel Ontuña
Bonne journée, manana ny scanner aho fa tsy azoko ilay logiciel horus 3d, mety hanampy ahy izany raha manana izany ianao satria tsy hita ao amin'ny github akory.
Mifantoka amin'izay olana rehetra aho.
Valiny tamin'i Julieth
Mampiseho amintsika ny bisikileta vita pirinty 3D i Sculpteo
DV WING, drone manokana ho an'ny fambolena marina